Lalao Ravalomanana : « vonona hatrany » – MyDago.com aime Madagascar
Hafaliana tsy omby tratra ny an’ireo mpiara-mitolona ao amin’ny Magro Mahajanga raha niara-nitafa tamin’ny kandidà Ravalomanana Lalao .Horakora-pifaliana, hoby ary teheka no nandraisan’izy ireo ny firesahana tamin’i Neny.Tamin’ny kabary nataon’ny CT Patrice no niarahabany an’i Neny tonga soa , nambarany fa tsy misy tokony hatahorana ny fahalanian’i Neny ao Mahajanga amin’ny filoham-pirenena, 1 er tour de vita raha ny eto Mahajanga hoy izy.Raha vao nandray fitenenana i Neny dia ny nitondra am-bavaka ny firenena no nataony. Ny vavaka manova zavatra hoy izy ka mahaiza misaotra sy mivavaka, aoka isika hifankatia hoy izy : « tiava ny namanao tahaka ny tenanao », « ento miakatra ity firenena ity » ireo no andian-tenin’ny soratra masina nentiny . Nohararaotin’ny zanak’i dada no nanolotra fanomeza ho an’i Neny amin’izao fetin’ny reny izao. Indro sarin’i Madagasikara no atolotray anao ho firarianay anao hitondra sy ho filohan’ny Madagasikara hoy izy ireo.
5 réflexions sur « Lalao Ravalomanana : « vonona hatrany » »
Samihafa ny endrika mitondra fanantenana sy ny endrika mitondra rotaka. Hatreto dia ny fivoriam-be ataon’i Lalao Ravalomanana dia tsy misy azo kianina ary inoana fa hitohy toy izany hatrany. Ho mafy mihoatra ny tamin’ny 2002 ny fitakiana amin’ity taona ity satria fanavotana amin’ny hery famoretana no atao.
Marina ny an’i Neny raha mitaky vavaka izy satria tsy miady amin’ny herin’ny olombelona i Madagasikara amin’izao fotoana izao fa dia ny herin’ny ratsy mihitsy no fahavalo.
Mbola antsoina ihany koa isika hitondra am-bavaka ireo olona mety hampiasain’ny ratsy. Raha mahavita izay dingana izay isika dia ho tafavoaka amin’izao lalana maizina izao. Mivavaha ho an’ny fahavalonao ary mivavaha ho an’izay manenjika anao dia ho ampy ny minoa fotsiny ihany satria efa namaly ny vavaka i Zanahary.
Mitohy ny tolona ary tsy maintsy mandresy
Tena tahaka ny ho tapaka ihany ny hevitra fa hitafy lamba za,
tsy maty amiko mihintsy ilay Neny mitafy lamba ry zareo a!Tiako be ary tena RAITRA NO MIAVAKA e!!
sady io dia antsika tsy hikambanana @’iza ERAN-TANY, mankasitraka Neny a!!!Gasy ka manja e!!!
RAITRA ê !!!
anisan’ny tariky FAHINY: RR Majunga dans « Lamba »
Nix pier j dit :
16 juin 2013 à 4 h 37 min
Mpanakorotana sy mpangorona arena jiaby reo nirotsaka katida reo afa-tsy i Lalao Ravalomanana .aoka izay ny fampijaliana ny vahoaka malagasy, mila anao ataon’Andriamanitra fitaovana amonjy an’ty gasikara ity ry Neny.
Précédent Article précédent : RAVALOMANANA LALAO : FAHOMBIAZANA NY DIANY TANY BOINA
Suivant Article suivant : Zanak’I Mahajanga manohana an’I Neny